एकचित्तको भएर यहोवाको सेवा गर्नुहोस् | अध्ययन
“मरियम . . . प्रभुको पाउनेर बसेर उहाँको कुरा सुनिरहेकी थिइन्‌। तर मार्था भने थुप्रै कुरा तयारी गर्नमा अल्झिएकी थिइन्‌।” —लूका १०:३९, ४०.
गीत: ९४, १३४
मार्था र मरियमले कसरी हाम्रो लागि राम्रो उदाहरण बसाले?
संसारको पूरा उपभोग नगर्नु भनेको के हो?
एकचित्तको भएर परमेश्वरको सेवा गर्ने सन्दर्भमा थुप्रैले कसरी येशू र पावलको अनुकरण गरेका छन्‌?
१, २. येशूले मार्थालाई किन माया गर्नुहुन्थ्यो? मार्था हामी जस्तै त्रुटिपूर्ण थिइन्‌ भनेर किन भन्न सक्छौं?
मार्था! यो नाम लिने बित्तिकै तपाईंको मनमा कुन कुरा आउँछ? येशूले मार्थालाई माया गर्नुहुन्थ्यो भनेर बाइबलमा बताइएको छ। तर यहोवाको डर मान्ने अन्य महिलाहरूलाई पनि येशू उत्तिकै माया गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै: उहाँकी आमा मरियम र मार्थाकी बहिनी, जसको नाम पनि मरियम नै थियो। (यूह. ११:५; १९:२५-२७) येशूले मार्थालाई माया गर्नुको कारण के थियो?
२ मार्था दयालु र मेहनती भएकीले मात्र येशूले उनलाई माया गर्नुभएको होइन। मार्थाले यहोवासित घनिष्ठ सम्बन्ध गाँसेकी पनि थिइन्‌। येशूले सिकाउनुभएका शिक्षाहरूमा उनी पूरा विश्वास गर्थिन्‌। प्रतिज्ञा गरिएको मसीह येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि उनी विश्वस्त थिइन्‌। (यूह. ११:२१-२७) तर उनी पनि हामीजस्तै त्रुटिपूर्ण थिइन्‌। एक पटक येशू मार्थाको घरमा आउनुभएको बेला मरियम उहाँको कुरा सुनिरहेकी थिइन्‌ तर मार्था भने खाना पकाउनमा व्यस्त थिइन्‌। त्यसकारण मरियमलाई सम्झाइदिन येशूलाई आग्रह गर्दै उनले यसो भनिन्‌: “प्रभु, मेरी बहिनीले सबै काम म एक्लैलाई छोडेको के तपाईंलाई वास्ता छैन? मलाई सघाउन उसलाई भनिदिनुहोस् न।” (लूका १०: ३८-४२ पढ्नुहोस्) यस विवरणबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
मार्थाले महत्त्वपूर्ण कुरा ठम्याउन सकिनन्‌
३, ४. मरियमले कुन अर्थमा “असल भाग” रोजिन्‌ अनि मार्थाले कुन कुरा सधैं मनमा राखिन्‌? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्)
३ मार्था र मरियमको निम्तो स्वीकारेर उनीहरूको घर गएको बेला येशू उनीहरूको आध्यात्मिक उन्नति हुने केही कुरा बताउन चाहनुहुन्थ्यो। महान्‌ शिक्षक येशू ख्रीष्टबाट मरियम थुप्रै कुरा सिक्न चाहन्थिन्‌। त्यसैले यस्तो राम्रो मौकामा “प्रभुको पाउनेर बसेर उहाँको कुरा सुनिरहेकी थिइन्‌।” वास्तवमा मार्थाले पनि त्यसै गर्नुपर्ने थियो। आफ्नो कामलाई एकातिर पन्छाएर येशूको कुरा सुन्न बसेकी भए उहाँले पक्कै उनको पनि प्रशंसा गर्नुहुने थियो।
४ मार्था येशूको राम्रो सत्कार गर्न चाहन्थिन्‌। उहाँलाई कसरी मीठो भोजन खुवाउने भनेर पनि उनलाई चिन्ता थियो। यस्तो बेला मरियमले मदत नगरेको देखेर उनलाई रिस उठ्यो। तर मार्थाले अनावश्यक चिन्ता लिइरहेको देखेर येशूलाई माया लाग्यो। त्यसैले उहाँले यसो भन्नुभयो: “ए मार्था, मार्था, तिमी धेरै कुराको ज्यादै चिन्ता गर्छ्यौ।” येशूले खानेकुरा एक थरी मात्रै भए पनि पुग्छ भन्नुभयो। अनि आफ्नी दिदीलाई मदत नगरेकोमा मरियमलाई हप्काउनुको सट्टा आफ्नो कुरा ध्यान दिएर सुनेकोमा तिनको प्रशंसा गर्दै यसो भन्नुभयो: “मरियमले आफ्नो निम्ति असल भाग रोजेकी छे र त्यो ऊबाट खोसिनेछैन।” येशूलाई आफ्नो घरमा निम्त्याएको बेला के खाएको थियो भन्ने कुरा मरियमले सायद बिर्सिन्‌ होला तर येशूबाट पाएको प्रशंसा र उहाँले सिकाउनुभएको बहुमूल्य कुरा भने कहिल्यै बिर्सिनन्‌। लगभग ६० वर्षपछि प्रेषित यूहन्नाले यस्तो लेखे: ‘मार्था र तिनकी बहिनीलाई येशू माया गर्नुहुन्थ्यो।’ (यूह. ११:५) हो, मार्थाले येशूबाट पाएको सल्लाह मनमा लिइन्‌ र वफादार भई यहोवाको सेवा गरिरहिन्‌।
५. यहोवाको सेवामा ध्यान केन्द्रित गर्न अहिले किन झनै गाह्रो भएको छ? यसले गर्दा कस्तो प्रश्न उठ्छ?
५ मार्थाले अरू कुरामा अलमलिएर महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिन नसके जस्तै अहिले पनि हामीलाई सजिलै अलमल्याउने त्यस्ता थुप्रै कुरा छन्‌। झन्डै ६० वर्षअघि अमेरिकामा विद्यार्थीहरूको एउटा समूहलाई यसो भनिएको थियो: ‘सञ्चार माध्यम, छपाइमा भएको प्रगति, आकर्षक चित्रहरूले भरिएका पत्र-पत्रिका, रोचक रेडियो कार्यक्रम, चलचित्र, टेलिभिजन कार्यक्रमको बिगबिगीले सजिलै हाम्रो समय खान सक्छ। हुन त हाम्रो यो युग ज्ञानको युगको हो तर हाम्रो ध्यान अनावश्यक कुराहरूमा अलमलिएकोले हामीले सही कुरामा ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं।’ सेप्टेम्बर १५, १९५८ को प्रहरीधरहरा-मा (अङ्ग्रेजी) यस युगको अन्त जति-जति नजिक हुँदै जान्छ, त्यति-त्यति हामीलाई “अलमलाउने कुराहरू बढ्नेछ” भनेर लेखिएको थियो। हो, अहिले हामीलाई अलमलाउने थुप्रै कुराहरू छन्‌। त्यसैले यस्तो प्रश्न उठ्छ: मरियमले जस्तै यहोवाको सेवामा ध्यान केन्द्रित गर्न हामी के गर्न सक्छौं?
यस संसारको पूरा उपभोग नगर्नुहोस्
६. परमेश्वरको सङ्गठनले कसरी प्रविधिको सदुपयोग गरेको छ?
६ परमेश्वरको सङ्गठनले साँचो उपासनालाई अघि बढाउन प्रविधिको सदुपयोग गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि, “सृष्टिसम्बन्धी फोटो-चलचित्र”-लाई लिनुहोस्। ध्वनि, रङ्गीन चित्र र छोटा दृश्यहरू भएको यो चलचित्र प्रयोग गरेर थुप्रै देशमा लाखौं मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गरियो। पहिलो विश्व युद्धअघि र त्यस दौडान मानिसहरूले यो चलचित्र हेरेर निक्कै सान्त्वना पाए किनकि यसमा येशूको हजार वर्षीय राज्यमा हुने कुराहरू पनि देखाइएको थियो। पछि सार्वजनिक रेडियो स्टेसनमार्फत प्रसारण भएको हाम्रो कार्यक्रमद्वारा संसारभरका लाखौं मानिसले सुसमाचार सुन्न पाए। अहिले यहोवाको सङ्गठनले सुसमाचार फैलाउन कम्प्युटर र इन्टरनेट जस्ता कुराहरू प्रयोग गर्दै छ। यसले गर्दा विकट गाउँहरू र पृथ्वीको चारै कुनामा सुसमाचार पुगेको छ।
अनावश्यक कुराहरूले आध्यात्मिक गतिविधिमा बाधा पुऱ्याउन नदिनुहोस् (अनुच्छेद ७ हेर्नुहोस्)
७. (क) संसारको पूरा उपभोग गर्नु किन खतरनाक छ? (ख) हामीले कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? (फुटनोट हेर्नुहोस्)
७ बाइबलले हामीलाई संसारले दिने कुराहरूको पूरा उपभोग नगर्न चेतावनी दिएको छ। (१ कोरिन्थी ७:२९-३१ पढ्नुहोस्) तीमध्ये केही कुराहरू आफैमा खराब त छैन होला तर त्यसले हाम्रो समय खान सक्छ। जस्तै: किताब पढ्न, टिभी हेर्न, रमाइलो ठाउँ वा बजार घुम्न, अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक साधनहरू चलाउन अनि आफूलाई सौख लाग्ने कुरामा समय बिताउन हामीलाई रमाइलो लाग्छ होला। अथवा, साथीभाइसित अनलाइन कुरा गर्न, मेसेज वा इमेल पठाउन, छिनछिनमा समाचार वा खेलकुदका खबरहरू सुन्न वा हेर्न पनि हामीलाई मनपर्छ होला। कोही-कोहीलाई त त्यस्ता कुराहरूको लत नै बसिसकेको हुन्छ। * (उप. ३:१, ६) यस्ता अनावश्यक कुराहरूमा समय खेर फाल्यौं भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थात्‌ यहोवाको उपासनालाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौं।—एफिसी ५:१५-१७ पढ्नुहोस्।
८. संसारमा भएका थोकहरूलाई प्रेम नगर भन्ने सल्लाह किन महत्त्वपूर्ण छ?
८ सैतानको इशारामा नाच्ने यो संसारले प्रथम शताब्दीमा जस्तै अहिले पनि हामीलाई आकर्षित गर्छ र हाम्रो मनलाई सजिलै अलमल्याउँछ। (२ तिमो. ४:१०) त्यसकारण हामीले यो सल्लाह पालन गर्नुपर्छ: “संसारमा भएका थोकहरूलाई प्रेम गर्ने मानिस नबन।” यस सल्लाहअनुसार चलेको छु कि छैन भनेर आफूलाई नियमित रूपमा जाँच्यौं र काँटछाँट गऱ्यौं भने हामी संसारका कुराहरूमा अलमलिने छैनौं र यहोवाको माया अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजान सक्नेछौं। त्यसो गर्दा हामीलाई यहोवाको इच्छाअनुसार चल्न सजिलो हुन्छ र उहाँको अनुमोदन पनि पाउँछौं।—१ यूह. २:१५-१७.
यहोवाको सेवामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्
९. येशूले चेलाहरूलाई कस्तो सल्लाह दिनुभयो? यस सन्दर्भमा उहाँ आफैले कस्तो उदाहरण बसाल्नुभयो?
९ मार्थालाई जस्तै येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई पनि अनावश्यक कुरामा नअलमलिन सल्लाह दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो आँखा एउटै कुरामा अर्थात्‌ यहोवा र उहाँको राज्यमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन दिनुभयो। (मत्ती ६:२२, ३३ पढ्नुहोस्) येशू आफै पनि भौतिक कुराहरूमा अल्झिएर बस्नुभएन। बाइबलले बताएअनुसार उहाँको आफ्नै घर थिएन र जग्गाजमिन जोरजाम पनि गर्नुभएको थिएन।—लूका ९:५८; १९:३३-३५.
१०. येशूले हाम्रो लागि कस्तो उदाहरण बसाल्नुभएको छ?
१० येशूको अगाडि पनि अलमल्याउने थुप्रै कुरा थिए। तर उहाँ त्यस्ता कुराहरूको पछि लाग्नुभएन। बप्तिस्मा गरेपछि उहाँ सुरुमा कफर्नहुम जानुभयो र त्यहाँका मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुभयो अनि चमत्कार पनि गर्नुभयो। मानिसहरूले उहाँलाई त्यहीं बस्न बिन्ती गरे। तर येशूले के गर्नुभयो? उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो “मैले अरू सहरहरूमा पनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, किनकि म यसैको निम्ति पठाइएको हुँ।” (लूका ४:४२-४४) उहाँ प्रचार गर्न टाढाटाढासम्म जानुभयो र धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सुसमाचार सुनाउनुभयो। हुन त उहाँ त्रुटिरहित हुनुहुन्थ्यो। तैपनि दिनभर प्रचार गरेपछि हामीलाई जस्तै उहाँलाई पनि थकाइ लाग्थ्यो र आराम चाहिन्थ्यो।—लूका ८:२३; यूह. ४:६.
११. पारिवारिक समस्यामा अलमलिरहेका एक मानिसलाई येशूले के भन्नुभयो? येशूले आफ्ना श्रोताहरूलाई कस्तो चेतावनी दिनुभयो?
११ एक पटक येशूले चेलाहरूलाई मानिसहरूले खेदो गर्दा के गर्ने भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति नै बेला एक जनाले उहाँलाई यसो भन्यो: “गुरुज्यू, मेरो दाइलाई हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्न भनिदिनुहोस्।” तर येशू त्यस मानिसको पारिवारिक मामिलामा अलमलिनुभएन। बरु यसो भन्नुभयो: “ए मित्र, तिमीहरूको न्याय गर्न वा अंशबण्डा गर्न कसले मलाई नियुक्त गऱ्यो?” त्यसपछि उहाँले आफ्ना श्रोताहरूलाई भौतिक कुराहरूको पछि लाग्दा यहोवाको सेवा गर्न सकिंदैन भनेर चेतावनी दिनुभयो।—लूका १२:१३-१५.
१२, १३. (क) ग्रीकहरू कुन कुराले गर्दा प्रभावित भए? (ख) ग्रीकहरूले येशूलाई भेट्ने इच्छा जाहेर गर्दा येशूले के गर्नुभयो?
१२ आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिका दिनहरूमा येशू निक्कै तनावमा हुनुहुन्थ्यो। (मत्ती २६:३८; यूह. १२:२७) मानिसहरूले झूटो आरोप लगाएर दुःख दिनेछन्‌ र अन्तमा धेरै पीडा सहेर मृत्युलाई अँगाल्नु पर्नेछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाह थियो। तैपनि आफूमाथि हुन लागेका कुराहरूबारे सोचेर उहाँ अलमलिनुभएन। किनकि उहाँले गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी थियो। इस्वी संवत्‌ ३३, नीसान ९, आइतबारको दिन के भयो, एकछिन विचार गर्नुहोस्। त्यो दिन येशू पाजीमाथि चढेर यरूशलेममा प्रवेश गर्नुभयो र मानिसहरूले “यहोवाको नाममा आउने राजा धन्यका होऊन्‌!” भन्दै उहाँको प्रशंसा गर्न थाले। (लूका १९:३८) त्यसको भोलिपल्ट येशू यरूशलेमको मन्दिरमा जानुभयो र परमेश्वरको उपासनालाई आड बनाएर मानिसहरूलाई लुटिरहेका लोभी व्यापारीहरूलाई त्यहाँबाट लघार्नुभयो।—लूका १९:४५, ४६.
१३ यहूदी धर्म अँगालेका ग्रीकहरू पनि यरूशलेममा निस्तार चाड मनाउन आएका थिए। तिनीहरू येशूको शिक्षा सुनेर निक्कै प्रभावित भए। त्यसकारण प्रेषित फिलिपमार्फत येशूलाई भेट्ने इच्छा जाहेर गरे। तर येशू भेटघाटमा अलमलिनुभएन। शत्रुहरूको हातबाट जोगिन उहाँ आफ्नो पक्ष लिने मानिसहरू जम्मा गर्नतिर पनि लाग्नुभएन। आफूले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेर येशूलाई थाह थियो। आफ्नो छिट्टै मृत्यु हुनेछ भनेर बताएपछि उहाँले अन्द्रियास र फिलिपलाई यसो भन्नुभयो: “जसले आफ्नो ज्यानलाई प्यारो ठान्छ, उसले त्यो नाश गर्छ तर जसले यस संसारमा आफ्नो ज्यानलाई घृणा गर्छ, उसले अनन्त जीवनको लागि त्यसको रक्षा गर्नेछ।” यहूदी धर्म अँगालेका ती ग्रीकहरूलाई थुप्रै कुरा जान्न मन लागेको थियो होला तर तिनीहरूको जिज्ञासा मेटाउनुको सट्टा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले देखाउनुभएको बाटोमा हिंड्न प्रोत्साहन दिनुभयो र भन्नुभयो: “यदि कोही मेरो सेवा गर्न चाहन्छ भने मेरो बुबाले उसको आदर गर्नुहुनेछ।” फिलिपले येशूको यो सकारात्मक सन्देश ती ग्रीकहरूलाई पक्कै बताए होलान्‌।—यूह. १२:२०-२६.
१४. येशू सन्तुलित हुनुहुन्थ्यो भनेर किन भन्न सक्छौं?
१४ येशूले आफ्नो मुख्य काम प्रचारकार्यमै तनमन लगाउनुभयो। तर उहाँ एकोहोरो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो भन्न खोजिएको पनि होइन। उहाँले अरू कुराको लागि पनि समय निकाल्नुभयो। जस्तै: उहाँ विवाह भोजमा जानुभयो र त्यो विशेष अवसरको रौनक बढाउन पानीलाई रक्सीमा परिणत गर्नुभयो। (यूह. २:२, ६-१०) आफ्ना घनिष्ठ साथीहरू र सम्भाव्य चेलाहरूले खाना खान बोलाउँदा उहाँ तिनीहरूको घरमा जानुभयो। (लूका ५:२९; यूह. १२:२) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँ प्रार्थना गर्न, एकान्तमा मनन गर्न र आराम गर्न पनि समय निकाल्नुहुन्थ्यो।—मत्ती १४:२३; मर्कू. १:३५; ६:३१, ३२.
‘हर किसिमका बोझलाई पन्छाउनुहोस्’
१५. पावलले कस्तो सल्लाह दिए? तिनले कसरी हाम्रो लागि राम्रो उदाहरण बसाले?
१५ समर्पित ख्रीष्टियनहरूको जीवनलाई दौडसित तुलना गर्दै प्रेषित पावलले यसो भने: ‘हर किसिमका बोझलाई पन्छाएर हाम्रो अगाडि राखिएको दौड धैर्य गरेर दौडौं।’ (हिब्रू १२:१ पढ्नुहोस्) यो सल्लाह पावल आफैले पनि लागू गरे। तिनले चाहेको भए यहूदी धर्मको शिक्षक बनेर समाजमा नाम र दाम कमाउन सक्थे। तर तिनले त्यस्ता कुराहरूलाई त्यागेर “अझ महत्त्वपूर्ण कुराहरू”-मा ध्यान दिए। तिनी प्रचार गर्न सिरिया, एसिया माइनर, म्यासिडोनिया र यहूदिया लगायत अन्य थुप्रै ठाउँमा गए। स्वर्गमा जीवन पाउने आफ्नो आशाबारे पावलले यसो भने: “म पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर अनि अगाडिका कुराहरूतिर लम्केर ख्रीष्ट येशू मार्फत . . . पुरस्कार पाउने लक्ष्यसम्म पुग्न त्यसको पछि लागिरहेको छु।” (फिलि. १:१०; ३:८, १३, १४) पारिवारिक जिम्मेवारी नभएकोले पावलले “कुनै अलमलविना निरन्तर प्रभुको सेवा गर्न” सके।—१ कोरि. ७:३२-३५.
१६, १७. विवाहित हौं वा अविवाहित, हामी कसरी पावलको अनुसरण गर्न सक्छौं?
१६ कसै-कसैले पावलले जस्तै विवाह नगरी बस्ने निर्णय गरेका छन्‌। पारिवारिक जिम्मेवारी नभएको हुँदा उनीहरूले परमेश्वरको सेवामा अझ धेरै समय बिताउन सकेका छन्‌। (मत्ती १९:११, १२) अर्कोतर्फ विवाहित व्यक्तिहरूको काँधमा भने अक्सर थुप्रै पारिवारिक जिम्मेवारी हुन सक्छ। हामी विवाहित हौं वा अविवाहित, ‘हर किसिमका बोझलाई पन्छाएर’ आफूलाई अलमल्याउन सक्ने कुरा घटाउन सक्छौं। हुन सक्छ, यसो गर्न हामीमध्ये कसै-कसैले समय खेर जान सक्ने आनीबानी छोड्नुपर्ला अनि यहोवाको सेवामा अझ धेरै समय बिताउन किटेरै लक्ष्य तोक्नुपर्ला।
१७ बेलायतको वेल्समा बस्ने मार्क र क्लेयरबारे विचार गरौं। स्कुलको पढाइ पूरा भएपछि यी दुवै जनाले अग्रगामी सेवा गर्न थाले। पछि उनीहरूको विवाह भयो र विवाहपछि पनि उनीहरूले अग्रगामी सेवा गरिरहे। मार्क यसो भन्छन्‌: “हामीले आफ्नो ठूलो घर बेच्यौं र काम पनि छोड्यौं। त्यसपछि देश-विदेशमा गएर निर्माणकार्यमा भाग लिने निर्णय गऱ्यौं।” बितेका २० वर्षदेखि तिनीहरू राज्यभवन बनाउन अफ्रिकाको विभिन्न ठाउँहरूमा गइसकेका छन्‌। कहिलेकाहीं त तिनीहरूसित एक छाक खान पुग्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो। त्यतिखेर यहोवाले तिनीहरूको ख्याल राख्नुभयो। क्लेयर यसो भन्छिन्‌: “हरेक दिन यहोवाको सेवा गर्न पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ। यसरी विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्दा हामीले थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीसित चिनजान बढाउने मौका पाएका छौं। हामीलाई कुनै कुराको कमी छैन। हुन त हामीले केही त्याग गर्नुपऱ्यो। तर पूर्ण-समय सेवा गर्दा पाएको आनन्दको तुलनामा ती कुराहरू केही पनि होइन।” पूर्ण-समय सेवा गरिरहेका थुप्रैले यस्तै अनुभव गरेका छन्‌। *
१८. कसै-कसैले कुन प्रश्नबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ?
१८ अनावश्यक कुराहरूमा अलमलिएकोले पहिले जस्तो जोसिलो भएर यहोवाको सेवा गर्न सकिरहनुभएको छैन कि? त्यसो हो भने हरेक दिन बाइबल पढ्ने र पहिलेभन्दा अझ राम्ररी व्यक्तिगत अध्ययन गर्ने उपाय खोज्नुहोस्। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ यसबारे हामी अर्को लेखमा पढ्नेछौं।
^ अनु.7यसै अङ्कमा भएको “निर्बुद्धि मानिसले आफूले सुनेको एक-एक कुरा पत्याउँछ” भन्ने लेख हेर्नुहोस्।
^ अनु. 17 मार्च १, २००६ को अङ्ग्रेजी वा हिन्दी प्रहरीधरहरा-बाट हेडन र मेलडी स्यान्डर्सनको हृदयस्पर्शी जीवनी पढ्नुहोस्। तिनीहरूले आफ्नो व्यापार-व्यवसाय बेचबिखन गरेर पूर्ण-समय सेवा गरे। भारतमा मिसनरीको रूपमा सेवा गरिरहेको समयमा एकपटक तिनीहरूको गोजीमा एक पैसा पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा यहोवाले तिनीहरूलाई कसरी सम्हाल्नुभयो, पढ्नुहोस्।